AMISOM iyo Qaramada Midoobay oo xarun cusub ku wareejiyay Booliiska maamulka Jubbaland | Ilwareed Online
Home WARKA DALKA AMISOM iyo Qaramada Midoobay oo xarun cusub ku wareejiyay Booliiska maamulka Jubbaland
AMISOM iyo Qaramada Midoobay oo xarun cusub ku wareejiyay Booliiska maamulka Jubbaland
“Maanta waxaan halkan u joognaa si aan u muujinno kalsoonida shuraakadayada, gaar ahaan UNOPS, gaar ahaan dhismaha dhismaha,” ayuu yiri Alalo oo qabtay shir Jaraa’id Isniintii.
Ku-xigeenka Taliyaha Bilayska ayaa arkay in askartu u baahan yihiin hoy ku filan si ay u gutaan waajibaadkooda, waxayna sheegtay in qof kasta ogaado halka baabuurtu ay tahay in loo isticmaalo si wacan si looga jawaabo baahiyaha bulshada.
Nazrul Kabir, Maamulaha Mashruuca ee UNOPS ee mashruuca, oo sidoo kale goobjoog ka ahayd xafladda, ayaa sheegay in saldhigga bilayska cusub uu gacan ka geysan doono kor u qaadista ammaanka Soomaaliya, iyo gaar ahaan Jubbaland.
“Tani waa xarun cajiib ah oo la siiyay ciidamada bilayska; waxay dhab ahaantii gacan ka geysan doontaa maamulka Jubbaland iyo xukuumadda Soomaaliya si ay u keenaan nabad, xasilooni iyo xasilooni gobolka. Waxaan rajeynayaa in xaruntani ay faa’iido u noqon doonto dadka Jubbaland iyo Soomaaliya, “ayuu yiri Kabir.
Xarunta Booliska ee Kismaayo waa xarunta afaraad ee shaqadeeda ay maalgeliso DFID. Qaar kalena waxay ku jiraan Baydhabo, Belet Weyne iyo Hargeisa. Shaqooyinka dhismaha iyo dayactirka, oo bilaabay sannadkii hore, waxay qaadatay 12 bilood in la dhammeeyo.
Previous articleAMISOM, UN handover new police headquarters to Jubbaland state
Next articleHowlagalo ka dhan ah Al-Shabaab oo ka socda Deegaano ka mid ah Sh/Hoose